बहाना- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
पुस २२, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — बाबु अलि छिटो खाऊ है ?’ आमा रिवाजलाई खाना सिध्याउन सम्झाउँदै हतारले भान्साबाट निस्कनुभयो । स्कुल बसले हर्न बजाइसकेको थियो । स्कुल त रिवाजलाई जानु थियो तर हतारचाहिँ आमालाई भइरहेको थियो ।
स्कुल ब्यागमा सबै सामान मिलाएर आमा हतारिँदै भान्सातिर आउनुभयो । रिवाज टेबलमा थिएनन् । प्लेटको खाना पनि त्यत्तिकै थियो । आमाले यताउता खोजिहेर्नुभयो तर उनीकतै देखिएनन् ।‘आज पनि ब्याग छोडेरै दौडिएछ । कस्तो केटो होला, हैरान पार्छ यसले त ।’ स्कुल बसलेफेरि हर्न बजाएकाले आमा रिवाजको ब्याग बोकेर हतारिँदै निस्कनुभयो ।
‘रिवाजचाहिँ खोई नि आन्टी ?’ उहाँ स्वाँस्वाँ हुँदै स्कुल बसको नजिकै पुग्नुभएको मात्र थियो, कन्डक्टर भाइले सोधिहाले । ‘अघि आएको होइन ?’ आमाको मन खङ्ग्रङ भयो ।
‘अहा आएको छैन, छिटो पठाइदिनुस् न ढिलो भइसक्यो ?’ उनी अलि दिक्क देखिएका थिए ।आमा केही नबोली ब्याग बोकेरै घरतिर फर्किनुभयो अनि रिवाजलाई बोलाउँदै पूरै घरको तीन चक्कर लगाउनुभयो तर उनी घरमा कतै पनि भेटिएनन् ।
बुवा अफिस जानका लागि तयार हुँदैहुनुहुन्थ्यो । आमा आत्तिएर त्यहीँ पुग्नुभयो ।‘सुन्नुभो ? बाबु त घरमा छैन,’ उहाँको स्वर अलि काँपेको जस्तै सुनिएको थियो । हतारले यताउता दौडिएकाले होला स्वाँस्वाँ पनिहुनुभएको रहेछ ।
‘स्कुल गयो होला नि, कहाँ जान्छ र ?’
‘भर्खर त म बससम्म पुगेर आएकी गएको छैन,’ आमा रुन थाल्नुभयो ।
‘के भन्छिन् यिनी ? कहाँ जान्छ रएक्लै ? ’ बुवाको अनुहार पनि चिन्तित देखियो । दुवै जनाले मिलेर रिवाजलाई खोज्न थाल्नुभयो ।
केही दिनअघि उनी यसैगरी गायबभएका थिए । निकै बेर खोजेपछि उनीस्टोर रुममा चामलको बोरा पछाडि लुकेको भेट्टाएर बुवाले अफिसजाँदा आफ्नो बाइकमा बसाएर स्कुल पुर्‍याइदिनुभएको थियो । तर आज त उनी स्टोर रुममा पनि भेटिएनन् ।
‘यसले त अति गर्न थाल्यो बा...,’ बुवा निकै चिन्तित देखिनुभयो ।रिवाजलाई खोज्दै दुवै जना बाथरुम अगाडि पुग्नुभयो । ढोका बन्द थियो ।‘बाबु.....१’ आमाले मसिनो स्वरमा बोलाउनुभयो । भित्रबाट रिवाजले ख्वाँकख्वाँक खोकेजस्तो गरे ।
ढिलो भएकाले स्कुल बस ट्याँटुँ ट्याँटुँ हर्न बजाउँदै गयो । त्यसको दस मिनेट जतिपछि बल्ल रिवाज बाहिर निस्किए । बाबा अफिस हिँड्न तयार भइसक्नुभएको थियो । रिवाज दुवै हातले पेट थिचेर कुप्रो परेर उभिएका थिए । उनका आँखाबाट आँसु पनि बगिरहेको थियो ।
‘होइन के भा छ अचेल यसलाई ? स्कुल नजाने अनेक बहाना खोज्छ ।’ बुवाले रिसाएर रिवाजको बायाँ हातमा समातेर तान्नुभयो, ‘हिँड् , स्कुल नगएर पनि हुन्छ कहीँ ।’
‘नाइँ... मेरो पेट दु:खेको छ ।’ रिवाज दाहिने हातले आमाको कुर्ताको फेर समातेर ठुल्ठूलो स्वर गर्दै रुन थाले । आमाको मन रसाएर आयो ।
‘भैगो छोडिदिनुस्, नजाओस् न त आज ।’
‘यसको नाटक सबै,’ बुवा रिसाउँदै निस्कनुभयो ।
बुवा भर्‍याङ ओर्लिएको आवाज आएदेखि घट्दै गएको रिवाजको रुवाइ बुवाले बाइक स्टार्ट गरेको आवाज सुनेपछि त बन्द नै भयो ।
आमा भान्साको काम सिध्याएर आउँदा रिवाज टिभी हेर्दै बसेका थिए ।
‘हजुर अफिस नजाने मामु ?’ रिवाजले टिभीबाट आँखा हटाएर आमातिर हेरे ।
‘अहँ, तिम्रो बदमास पेटले जानै दिएन,’ आमा मुसुक्क हाँस्नुभयो । आमा हाँसेको देखेर उनी पनि हाँसे । ‘मलाई पनि तिमी जत्रो हुँदा स्कुल जानै मन लाग्दैन थियो अनि म पनि पेटदुख्यो भन्दै रोइदिन्थेँ,’ आमाले रिवाजको कपाल मुसार्दै भन्नुभयो ।
‘हजुरका पनि बदमास साथीहरू थिए ?’ रिवाजले आमातिर आश्चर्यले हेरे ।
‘थिए नि, होमवर्क नगर्दा सरले पनि कस्तोगाली गर्नुहुन्थ्यो ।’
‘म त सधैं होमवर्क गर्छु । मलाई पढ्न मन लाग्छ,’ रिवाजले भने ।
‘अनि स्कुल जानचाहिँ किन मन लाग्दैन त सानु ?’ आमाले नरम स्वरमा सोध्नुभयो ।
‘रोजन र प्रनिश मिलेर मलाई जिस्काउँछन् । मेरो कापी किताब लुकाइदिन्छन् । मैले छुँदै छोएको थिइनँ, हिजो प्रनिशको पेन्सिल बक्स मेरो ब्यागमा राखिदिएछन् । उल्टै मलाई चोर दोष लगाए । सरले पनि गाली गर्नुभयो मलाई ।’ बोल्दाबोल्दै रिवाजका आँखामा आँसु भरिएर आयो ।
‘सर कक्षामा नभएको बेलामा मलाई हात्ती बन् भन्छन् । एउटा सुँड हालिदिए पुग्छ रे । सबै कक्षाका साथीहरू मलाई हेरेर हाँसे । मेरो एउटा पनि मिल्ने साथी छैन । म स्कुल जान्नँ ।’ रिवाजको गुनासो सकिएकै थिएन, उनी आमाको जीउमा टाँसिएर रुन थाले ।
‘अनि तिमीले सरलाई साँचो कुरा भन्नुपर्छ नि त ?’ आमाले सम्झाउन खोज्नुभयो ।
‘सरलाई भन्यो भने त मलाई झन् दु:खदिन्छन् नि ।’
एकछिनसम्म आमा केही बोल्नुभएन । रिवाजको कपाल मुसारिरहनुभयो । बिस्तारै रिवाजको रुवाइ पनि कम हुँदै गयो ।
म भोलि तिमीसँगै स्कुल जान्छु अनि सबै कुरा प्रिन्सिपललाई भन्छु है । आफ्नोगल्ती नभएपछि डराउनु हुँदैन नि ।
अनि मलाई पोल लगाएको भनेर उनीहरूले पिटे भने ?
‘पिट्दैनन्, सरले सबै कुरा उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ अनि तिमीलाई कसैले दु:ख दिँदैनन् ।
भोलिदेखि सधैं स्कुल जाने है ?’ आमालेआफ्ना दुवै हत्केलाले च्यापेर रिवाजको मुखआफूतिर फर्काउनुभयो । रिवाजले एकछिनसम्म आमाको मुखमा टुलुटुलु हेरिरहे अनि सानो स्वरमा भने, ‘हस् ।’
आमाले उनको निधारमा माया गर्नुभयो । रिवाज टिभी बन्द गरेर उठे अनि आफ्नो ब्यागबाट किताब निकालेर पढ्न थाले । उनले मनमनै अठोट गरे, ‘अबदेखि म साथीहरूले सताए भने सरलाई भन्छु तर स्कुल नजाने बहाना कहिल्यै बनाउदिनँ ।’
प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १२:३७
म त सानी सानी...
काठमाडौँ — म त सानी–सानी हुँ ननेपाली नानीदेशविदेश घुम्ने, संस्कृतिलाई चिन्ने ।
प्रिशा श्रेष्ठ १० वर्षकी भइन् । उनी अमेरिकाको टेक्ससस्थित अस्टिनमा बसोबास गर्छिन् । अमेरिकामा उनी बालगायिकाको रूपमा चिनिएकी छन् । यति सानो उमेरमै उनको स्वरमा सातवटा गीत रेकर्ड भइसकेका छन् ।
प्रिशा भन्ने उनको एल्बम नै निस्केको छ । उनले गाएका गीतहरू केही देशभक्ति र अन्य बाबालिकासँग सम्बन्धित छन् । उनी छोटो चलचित्र ‘तुइन’ की बालकलाकार पनि हुन् । आफूले स्वर दिएका गीतहरूको भिडियोमा उनले अभिनय गरेकी छन् ।अमेरिकामै जन्मिएका अधिकांश नेपाली बालबालिका राम्रोसँग नेपाली भाषामा कुरा गर्न सक्दैनन् । प्रिशा भने अमेरिकामै जन्मेर पनि नेपाली र नेपालभाषासमेत प्रस्ट बोल्छिन् । ठेट नेपाली भाषामा स्टेजमै लाइभ गीत गाउँछिन् ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा अस्टिनमा भएको कार्यक्रमा उनले कालीप्रसाद बाँस्कोटासँगै स्टेजमा आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नि । प्रिशाले अंग्रेजी गीत पनि रेकर्ड गराएकी छन् । युट्युबमा समेत सुन्न सकिने उनका गीतलाई बालबालिकाले धेरै रुचाएका छन् ।
‘सानैदेखि उसलाई गीत गाउन रुचि थियो,’ आमा सृजना उप्रेती भन्छिन्, ‘अहिले त स्वरमा पनि निखार आइसकेको छ, उसको गायकीले हामीलाई पनि हौसाएको छ ।’ छोरीको गायनमा थप हौसला दिन प्रिशाका अभिभावकले अस्टिनमा छिट्टै एकल साँझको तयारी गरेका छन् ।
बाबा–आमासँगसम्बन्धी उनको गीतले यहाँ उत्कृष्ट बालगायिकाको अर्वाडसमेत पाइसकेको छ ।जति माया लाग्छ मामुको, त्यति माया लाग्छ बाबाको पनिमलाई राम्रो लाग्छ मामुबाले सँगै बसी बोलाएको नानु भनी ।
‘मलाई आफनै देशको कला र संस्कृति झल्कने गीत गाउन मन पर्छ,’ प्रिशा भन्छिन्, ‘विदेशमा बसेर पनि गीतमाआफ्नो देशलाई चिनाउन मन लाग्छ ।’
उनले गायक स्वरूपराज आचार्यसँग ‘टुक्रिएको देश हैन, मलाई सिंगो नेपाल चाहिन्छ...’ बोलको गीत पनि गाएकी छन् । सहयोगी भवनाकी प्रिशा आफैं गीत पनि लेख्छिन् । आफूले संकलन गरेको रकम उनले धादिङको विकट गाउँका २२ जना चेपाङ बालबालिकालाई हरेक महिनालाई हुने गरी खाजा खर्च पठाउँदै छिन् ।
प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १२:३५
चित्र बनाउन ५६ स्कुलको जमघट
ईदमा रमाएका साथीहरु
छात्रालाई पढ्न सहयोग